Madaxweynihii hore ee dalka Mwai Kibaki oo waalidiinta usheegay in ay qataan masuuliyada dugsiyada la gubayo – The Voice of Northeastern Kenya
Madaxweynihii hore ee dalka Mwai Kibaki oo waalidiinta usheegay in ay qataan masuuliyada dugsiyada la gubayo
Madaxweynihii hore ee dalka Mwai Kibaki ayaa ra’yigiisa ku biiriyay muranka ka taagan falalka dugsiyada lagu gubayo.
Mwai Kibaki ayaa carabka ku dhuftay in dugsiyada la gubayo anan la ogolaan Karin sido kalena ay tahay arin laga qoomamoodo.
Hadalkan ayuu madaxweynihii hore ee dalka jeediyay maanta xili uu ku sugnaa munasabad ka dhacday dugsiga sare ee wiilasha ee Starehe ee magaaladatani Nairobi isaga oo intaas ku daray in waalidinta ay qataan masuuliyada falalka ay caruutoodu ku kacaan.
Baaqa Mwai Kibaki ayaa kus oo begmaya saacado ka dib markii si lama filaan ah loo xiray dugsiga sare ww wiilasha ee Milo Friends oo ku yaala degaanka webuye ee galbeedka dalka .
Talaabada dugsigan lagu xiray ayaa timid kadib markii dab la qabadsiyay qeybta jiifka ee dugsigaasi iyada oo 3 arday oo dhacdadan lala xiriirinayo gacanta lagu dhigay.
Ardaydan ayaa xiliga ay qeybta jifka ee dugsiga gubayeen dhigayay dibadbax ay uga soo horjedaan arday cisbitaalka ku jiray oo sida la sheegay udhitay garaac uu ugeystay mid ka mid ah macalimiinta.
Dugsigan ayaa noqonaya midkii 117-ad ee la gubo mudo laba bilood ah gudahooda halka dadka tacliinta daneeya ay doonayaan in dugsiyada dhamaan la xiro.
Dhanka kale madaxweyne uhuru Kenyatta ayaa waxa u eedeyn ku aadan schoolada la gubayo taas oo ka socota guud ahaan dalka uu u jeediyay waalidiinta isago sheegay in ay gacan weyn ka qaadanaayan iyago ardayda culees ku saarayo in ay la yimaadan natijooyin wanaagsan taas oo ardayda ku dhalineyso in ay guban schoolada iyago u arka in xalka u ku jiro in ay ku dhaqaaqan talaabadaasi
Waxa u madaxweynaha intaas ku daray in waalidiinta laga doonayo in ay ku dadaalan in caruurtooda ay baran anshax wanaagsan halka ay culeeska ku saari lahaayen in ay guulo kasoo hoyaan imtixaanada qaran oo ay galaan.
Waxa ugu dambeynti u madaxweynaha ku booriyay ardayda in ay ka meelkeenan taclinta isago dhinaca kalena sheegay in ardayda ku kaca falalka schoolada lagu gubayo schoolada in sharciga lala tiigsan doono.
Ugu dambeyntina tirada dugsiyada ee la gubayo ayaa sara u sii kacayo halka baaqyada arintan la xiriira ee la jeedinayana ay isa soo tarayaan.
← Gudniinka fircooniga oo la sheegay in uu dalka ku yaraaday
Barcelona oo ka adkaatay Celtic →